Ny tantarantsika | NAB Show News | 2021 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » ny Tantara
Ryan Salazar, mpanorina Fampitana Beat Magazine
Ny brainchild ny niakatra-sy-haino aman-jery avy mpandraharaha Ryan Salazar, Broadcast Beat sary ny ny niches izay efa nanary baovao hafa kely Ka hanohona ny tsena sy ny teknolojia vaovao namorona eo taorian'ny. "Magazine Broadcast Beat dia natao hanomezana ny vaovao rehetra ny indostria rehetra raha sendra izay," touts Salazar. “Alaivo sary an-tsaina, orinasa mpamokatra maro an'isa sy orinasam-pifandraisana an-jatony… nipaoka toerana iray hizarana vaovao momba ny indostria! Ho fanampin'izay, ny Broadcast Beat dia manana mpanoratra mpiasa manoratra atiny orina voalohany isan'andro. Ireo mpanoratra ireo dia nanoratra saika ny ankamaroan'ny fanontana printy sy e-publication amin'ny indostria! ”
Famoronana votoaty, fitantanana atiny ary fandefasana atiny - SATRATRA daholo! Ny atiny dia lakilen'ny varotra haino aman-jery ary ny fahalalana loharano tokana ho an'izany no zava-dehibe indrindra. Nolazain'izy ireo fa ny fahalalana dia antsasaky ny ady - nataonay ianao handrakofana izany antsasak'adiny izany ary avy eo!
Broadcast Beat dia efa nanolo ireo zavatra vita an-tsoratra taloha izay nanely ny vaovao momba ny famokarana an-tsoratra amin'ny pirinty ho mpanelanelana. Izahay dia tsy hoe hivoaka hividy vaovao fotsiny fa halefa hatrany amin'ny tranonkalantsika! Ny Broadcast Beat dia mandrakotra ny seho indostrialy rehetra manerantany sy amin'ny ankamaroan'ny tranga, miaraka amin'ny fandrakofana horonantsary an-tserasera manomboka eo amin'ny gorodon'ny fampisehoana.
"Manana fifandraisana amin'ireo orinasam-pifandraisana ambony sy mpampita vaovao ary mpanamboatra isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny fikambanana toy ny National Association of Broadcasters (NAB), Society of Motion Picture & Television Engineers (SMPTE), Akademia Nasionalin'ny Zavakanto & Siansa Televiziona (NATAS) ary maro hafa, ”hoy i Salazar.
Mila feo ny indostria - ary eo ny Broadcast Beat hanome azy. Ankoatry ny atiny rehetra antenainao avy amin'ny loharanom-pahalalanao na miankina aminao ankehitriny na taloha, dia faly ny mpamaky mahita ny habetsaky ny fitaovana manomboka amin'ny teknika ka hatrany amin'ny hafahafa ary na aiza na aiza eo anelanelany. Broadcast Beat dia mijery teknolojia vaovao sy vao manomboka ary mampiseho azy amin'ny fomba fijery izay mahaliana na ny ao amin'ny orinasa na ny any ivelany.
Mieritreritra ny hanova asa amin'ny media? Broadcast Beat dia manana lisitry ny Hot Jobs izay tsy hahasarika ny masonao fotsiny fa mety hametraka anao ao amin'ny sokajy "movers-and-shakers" ary hampitombo ny vola azonao! Mitadiava asa tonga lafatra izay tsy hifanaraka aminao fotsiny fa ho lalao mety tsara amin'ny asanao vaovao! Miampita fiaran-dalamby hampitomboana ny fahalalana sy ny traikefanao ary koa ny fototra ara-bola! Eo ny asa - MIASA ANAO IZAO mba hanovana ny tsara!
Raha toa ny fehezan-teny hoe “Ny rahona” nipoitra ary toa tsy dia nampiasaina loatra ny dokam-barotra, ny ho avin'ny atiny media sy ny fanatanterahana ny tinady amin'ny finday sy ny solosaina dia miankina amin'ny Cloud mba hanomezana ny mpanjifa maoderina izay tadiavin'izy ireo rehetra - atiny rahoviana ary aiza no mety hahitan'izy ireo azy. Izaho dia anisan'ny fikambanana lehibe iray mifantoka amin'ny Cloud aza - ny fahafantarana ny Broadcast Beat izay hanampy hampiely.
Faritra marobe, be dia be no takiana - fa ny Broadcast Beat kosa ho eo mba hahazoana antoka fa eo ianao! Ny tantara isan'andro dia hanampy anao hitazona ny toetr'andro amin'ny indostrian'ny haino aman-jery miovaova hatrany amin'ny fiovan'ny toetr'andro ka hatramin'ny fanovana lehibe! Miaraka amin'ny mpanoratra fantatra tsara manao anao ho tsara fahalalana toy ny tokony ho eo amin'ny tsenan'ny haino aman-jery! Betsaka ny asa tokony hatao - koa amin'izao fotoana izao, tazomy ny fampahalalana ataonao ary ataovy anaty bilaogy!